Indawo yokuthengisa ishishini kunye neRhafu kwiRealWW
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Izakhiwo zezoshishino
umbono Izakhiwo zezoshishino ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
Indawo Ngumhlaba kunye nezakhiwo kunye ziqwalaselwa njengepropathi. Olu setyenziso luvele kubanini beepropathi bafumana igama [itayitile] yabo, apho lithetha ngokuchanekileyo igama elithi "esele likhankanyiwe; lithetha ngantoni olu xwebhu", lisuka [Latin] prae-missus = "libekwe ngaphambili". Ngale ndlela, igama lisoloko lisetyenziswa kwisininzi, kodwa sisinye ekwakheni. Qaphela ukuba indlu enye okanye enye into eyenye yeyepropathi "yindawo", ayisiyi "ndawo", nangona igama elithi "indawo" libhalwe ngendlela; Umz. "Izixhobo zikwindawo ethengiwe umthengi", soze "Izixhobo zikwindawo yomthengi".